ISOMBULULO: Inkqubo yokugungxula itanki inkulu kakhulu -Ikaro
yokuqalisa >> Ukulungiswa >> Ungayitshintsha njani indlela yamanzi okugungxula itanki lokusetyenziswa kwincinci
Ungayitshintsha njani indlela yamanzi okugungxula itanki lokusetyenziswa kwincinci
Ndiza nokulungiswa. Into engacwangciswanga ukuphelelwa lixesha, kodwa phantse. ndine indlela yokugungxula itanki lamanzi yonakele. Ezi zilungiso ezilula kakhulu ezingadingi nkcazo ingako, uqhekeza endala, uthenge entsha uyifake.
Kodwa ngaba kunjalo azikho iimodeli zethangi lam lamanzi. Ngoku zinobungakanani kwindalo iphela kwaye zinobubanzi obukhulu kunokuba ndifuna. Kuba into esinayo ekhaya yimodeli endala kunye neyeVintage.
Ingxaki ngendlu yangasese
Ingxaki, njengoko benditshilo ngasentla, yile ityhubhu yombhobho wendlela yendalo iphela ibanzi kunedayim yomngxuma wequla kufuneka idlule.
Ngumbandela weemilimitha kodwa akwenzeki kwaye xa ndisiya eLeroy Merlin nakwiinkampani ezininzi zokufaka imibhobho yamanzi bandixelela ukuba abananto incinci, kuya kufuneka nditshintshe itanki okanye indlu yangasese iphela.
Kwaye njengendlu yangasese ekhethekileyo, unkosikazi wam uthi ukuba siyayitshintsha indlu yangasese kunye nesinki kwaye oku sele kungumbandela wokuzingca.
Kwimeko yam, ilula kakhulu, nangona ndingakhange ndizifumane iziqwenga endizifunayo kwaye ndikwazile ngento endiyifumene eLeroy Merlin. Imalunga ne yenza ukunciphisa ngemibhobho yePVC.
Ndiyazi ukuba yinto elula kakhulu njengoko ndisitsho kwaye ibonakala icacile kodwa ndiqinisekile ukuba abantu abaninzi, abajamelene nale ngxaki, bayayitshintsha indlu yangasese iphela.
Ndithelekise ityhubhu ndiyincamathisele ngaphakathi kwesiseko soomatshini. Ndiyincamathisele nge-PVC welder glue kwaye ke inxalenye (engwevu) evelayo kwaye ekufuneka ihambile ndiyithobile ngeDremmel.
[ukhanyisile] Ukuba uyenza kanye njengam, qaphela ukuba yonke into emsonto umhlophe ingaphakathi kwequla kwaye ngamanzi angadluliyo. Itanki lam liphezulu kwaye andinangxaki, kodwa jonga kwaye ukuba ufuna ukusebenzisa amanzi amaninzi, sika eli candelo ukuze ulungelelanise kangangoko kwindawo yokukhupha amanzi. [/ Ephawulwe]
Ndiyiphawula ukuze uyibone ngokucacileyo. Ungalusika oluphawulwe ngombala obomvu kwaye ngale ndlela luyakugungxula ngetanki ngaphakathi.
Ndifuna ukuba icandelo elivelayo lifakwe kwimisonto ukuze likwazi ukuliqinisa kakuhle kwaye lilungiswe, kodwa kuba ndingakhange ndiyifumane into ebendiyifuna kwaye andinayo iprinta ye-3D, yahlala njengoko ubona emfanekisweni. Ndithathe ithuba ngomsonto osetyenziselwa ukuqinisa ukubamba indlela ngaphakathi.
Ekugqibeleni Ndenze ukukhawuleza usebenzisa i-silicone kwaye kufuneka nditsho ukuba ibilunge kakhulu kwaye isebenza ngokugqibeleleyo.
[uphakanyisiwe] ICEBISO LE-BRICO: Sukusebenzisa i-silicone ephelelwe lixesha ngaphezulu konyaka ophelileyo. Ayomi kakuhle kwaye isincamathelisi sincamathele kwaye kuye kwafuneka ndisuse ndicoce. Konke ngomnqweno wokuphinda usebenzise: S [/ kubonisiwe]
Ekupheleni kwayo yonke into, kufuneka sigcine engqondweni ukuba sinokuphinda sisebenzise iinkqubo zokukhupha izinto nokuba azingeni emngxunyeni wequla.
Eli libali elipheleleyo. Ukuba nabani na unolunye uluvo okanye kukho indlela yala matyala, shiya inkcazo. Kwandibiza ngaphezulu kwe- € 1 ukuyilungisa.
Kwaye ndinolwaneliseko lokungatshintshi indlu yangasese ikwimeko entle.
Inqwelomoya oqhelekileyo (Delichon urbicum)